Fandresena ny fahafatesana
Fa ny tenan’ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin’ny fiantsoana sy ny feon’ny arikanjely ary ny tromptran’Andriamanitra, ka izay maty ao amin’i Kristy no hitsangana aloha; ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin’ny rahona hitsena ny Tompo any amin’ny habakabaka; dia ho any amin’ny Tompo mandrakariva isika” 1 Tes. 4:16,17
Miantso ireo olo-masina hifoha amin’ny torimaso ny Zanak’Andriamanitra hivoaka avy ao amin’ny tranomaizin’ny fahafatesana izy ireo, ary mitafy ny voninahitra tsy mety maty, hiantsoantso manao hoe: “Ry fahafatesana ô, aiza ny fandresenao?” 1 Kor. 15:55
Ovàna ao anatin’ny fotoana fohy ireo olo-marina sisa velona, “ao anatin’ny indray mipi-maso”. Omem-boninahitra izy ireo avy amin’ny alalan’ny feon’Andriamanitra; ankehitriny lasa mety maty izy ireo ary hakarina any an-danitra hihaona amin’ny Tompony eny amin’ny lanitra miaraka amin’ireo olo-masina vao avy natsangana tamin’ny maty.
Mialoha ny hidirana ao amin’ny tananan’Andriamanitra, dia hapetraky ny Mpamonjy eo amin’ireo olona mpanaraka Azy ny fanevan’ny fandresena ary homeny azy ireo ny marika maneho ny maha-zanaky ny Mpanjaka azy ireo hapetrak’i Jesosy eo amin’ny lohan’ireo olona mpandresy amin’ny tanany ankavanana ny satroboninahitra . Hahazo satroboninahitra ny olona tsirairay, ary voasoratra eo amin’izany satrobininahitra izany ny “anaran’izy ireo vaovao”. Miaraka amin’ilay soratra hoe “Masina ho an’ny Tompo”. Hapetraka eny amin’ny tanan’ny mpandresy tsirairay avy ny harpa mamirapiratra . Ka rehefa mibaiko ny hira ny anjely mpitarika ny antoko mpihira dia hitendry ny lokanga ny tananan tsirairay, amin’ny alalan’ny fomba fitendrena tena feno talenta, ary hamoaka mozika mamy amin’ny feo samy hafa. Fifaliana tsy hay lazaina no hameno ny fo tsirairay, ary ny feo rehetra dia hakarina ao anatin’ny fiderana feno fisaorana.
Hita eo anoloan’ireo vahoaka maro be izay efa voaefa trosa ny Tanàna Masina. Sokafin’i Jesosy midanadana ilay vavahady vita amin’ny perila, ary hiditra ao ireo firenena nitandrina ny fahamarinana injay fa re, ilay feo kanto ary manankarena lavitra noho izay mozika rehetra efa ren’ny sofin’olombelona mety maty, ka milaza hoe: “tapitra ny adinao”. “Avia hianareo izay notahin’ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao” Mat. 25:34
Tanteraka ankehitriny ny vavaky ny Mpamonjy ho an’ny mpianany, “Ray ô, tiako mba ho any amiko amin’izay itoerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao Ahy izy; fa efa tia Ahy Hianao, fony tsy mbola ary ny fanoranan’izao tontolo izao” Jao. 17:24. “Ary ho an’izay maharo anareo mba tsy ho tafintohina ary hametraka anareo tsy hanan-tsiny eo anoloan’ny voninahiny amin’ny firavoravoana” Joda 24. Asehon’i Kristy amin’ny Ray ny vidin’ny rany(...) ny fahatsaran’ny fitiavana mahavonjy! Ny fifaliana amin’io ora io, rehefa mijery ireo olona efa voaefa vidy ny Ray, dia ho hita eny amin’izy ireo ny endriny (...)!